Yiyiphi iManzi enzima kunye Nokuba Yenzani
Amanzi amaninzi ngamanzi anokuqulethe i- Ca 2+ kunye ne- Mg 2+ . Maxa wambi i-Mn 2+ kunye nezinye izicatshulwa ezihlanganisiweyo zifakiwe kumlinganiselo wobunzima. Qaphela ukuba amanzi angabandakanya iimaminerali kodwa kungabonakali nzima, ngolu ngcaciso. Amanzi anamanzi ayenzeka ngokwemvelo phantsi kweemeko apho amanzi ehamba nge-calcium carbonates okanye i-magnesium carbonates, njengesiki okanye i-limestone.
Ukuphonononga indlela enzima ngayo amanzi
Ngokutsho kwe-USGS, ubunzima bamanzi bunqunywe ngokusekelwe kwiinkcenkceshelo zezicatshulwa ezidityanisiweyo:
amanzi athambileyo - 0 ukuya ku-60 mg / L (iiligidi ngeyure) njenge calcium carbonate
amanzi anzima ngamanzi - 61 ukuya ku-120 mg / L
amanzi anamanzi - 121 ukuya ku-180 mg / L
Unzima kakhulu amanzi - ngaphezu kwe-180 mg / L
Impembelelo yamanzi enzima
Zomibini iziphumo ezintle nezimbi zamanzi ezinzima ziyaziwa:
Amanzi anamanzi anokubonelela ngeenzuzo zezempilo njengamanzi okusela, xa kuthelekiswa namanzi athile . Ukusela amanzi anzima kunye neengxube ezenziwe ngamanzi anzima kunokufaka isandla kwiimfuno zokutya ze-calcium kunye ne-magnesium.
I-Soap iyicoca elincinci kangangoko kumanzi onzima. Amanzi anamanzi enza kube nzima ukuhlamba isepha , kunye neyakhe i-curd okanye i-sop scum. Umtsalane uchatshazelwa ngamaminerali aphelileyo kumanzi onzima, kodwa kungekhona kumlinganiselo ofana nesepha. Isepha ezininzi okanye i-detergent kufuneka ukuba zihlambulule iimpahla kunye nezinye izinto zisebenzisa amanzi anzima xa kuthelekiswa namanzi athambileyo. Izinwele ezihlambulukileyo emanzini anzima zingabonakala zibuhlungu kwaye zizizwe zizinzile kwiindawo zokuhlala. Iingubo ezihlambulukileyo emanzini azinzileyo zingakhohlisa i-yellow or gray golly and may feel stiff.
Isisele esele sishiye esikhwameni ekuhlambuleni emanzini anzima sinokubamba iibhaktheriya phezu kwesikhumba kwaye kuphazamise ukulinganisela okuqhelekileyo kwe-microflora. Ngenxa yokuba intsalela inqanda amandla esikhumba ukubuyela kwi-pH yayo encinci, i-irritation iyakwenzeka.
Amanzi anamanzi anokushiya emva kwamanzi amaninzi kwiitya, iiwindi kunye nezinye izinto.
Amaminerali emanzini onzima angayifaka emibhobho nakwiindawo ezenza umlinganiselo. Oku kunokubeka iipayipi ngexesha kunye nokunciphisa ukusebenza kombane. Enye into ebalulekileyo yesikali kukuba yakha umqobo phakathi kwemibhobho namanzi, ukunciphisa i-leaching ye-solder kunye neyinyithi emanzini.
I-electrolytes emanzini anamanzi angakhokelela ekuhambeni kwe-galvanic, okuyiyo xa isinyithi sidibanisa xa sidibana nesinye isinyithi phambi kweeon.
Amanzi aKhatshanje kunye anesigxina
Ubunzima bexeshana bubonakaliswe ngamaminerali e-bicarbonate (i-calcium bicarbonate kunye ne-magnesium bicarbonate) eyenza i-calcium kunye ne-magnesium cation (Ca 2+ , Mg 2+ ) kunye ne-carbonate kunye ne-bicarbonate anion (CO 3 2- , HCO 3 - ). Olu hlobo lobunzima bamanzi lunancitshiswa ngokufaka i-calcium hydroxide emanzini okanye ngokuyilisa.
Ubunzima obungapheliyo ngokuqhelekileyo bunxulumene ne-calcium sulfate kunye / okanye i-magnesium sulfates emanzini, awanako ukukhawuleza xa amanzi ephekwa. Ubunzima obunaphakade bokuba sisisigxina sobunzima be-calcium kunye nobunzima be-magnesium. Olu hlobo lwamanzi onzima lunokuthambisa ngokusebenzisa ikholishoni yokutshintshiselwa kwe-ion okanye isithinja samanzi.
Ifomula yoMkhosi: Inkcazo kunye nemizekelo
I-Spectroscopy Inkcazo kunye nokwahlukana ukusuka kwi-Spectrometry
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zase-Alabama
Indlela yoPaint iipilisi zePivili zokubuyisela
Ukuqokelela iKentucky Derby Glass
Les Présentations - Izalathiso zeFrench IsiNgesi ezimbini zeBali